काठमाडौं-दोहाका हवाई यात्रुलाई असर नपर्ने
काठमाण्डौ । खाडी क्षेत्रका आधा दर्जन छिमेकी मुलुकले कतारसँग गरेको कुटनीतिक सम्बन्ध बिच्छेदले नेपालबाट हवाई यात्रा गरी कतार जाने यात्रुलाई कुनै प्रभाव नपर्ने सम्बद्ध वायुसेवाले स्पष्ट पारेका छन्। हाल काठमाडौंबाट कतारको सरकारी वायुसेवा कतार एयरवेज, नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल-चीन संयुक्त लगानीको हिमालय...
काठमाडौंको जेब्रा क्रसिङमै मारिइन् शिक्षीका
काठमाण्डौ । सुनसरीकी २३ वर्षीया रविना चौधरी वसुन्धरास्थित पञ्चाइन बोर्डिङमा पढाउन सोमबार बिहान नौ बजे सुकेधारास्थित घरबाट निस्किइन् । चक्रपथ चल्ने बस चढेर वसुन्धरामा ओर्लिइन् । चक्रपथबाहिर रहेको स्कुल जान जेब्रा क्रसिङबाट बाटो पार गर्न लाग्दा तीव्रगतिमा आएको यात्रुवाहक बसले उनलाई ठक्कर दियो । घटनास्थलमै उनको निधन भयो । डेढ महिनाअघि...
काठमाण्डौ । बारम्बार अनेकौं विवादमा परिरहने अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन शाखामा अचेल अनौठो दृश्य देखिन्छ । पाँच जना उपसचिव प्रत्येक दिन अध्यागमन शाखामा आउँछन्, हाजिर गर्दैनन्, सक्रिय भएर काम पनि गर्दैनन् तर, नियमित कर्मचारीझैं उपस्थिति देखाइरहन्छन् । गृह मन्त्रालयले काजमा अध्यागमन खटाएका यी पाँचै उपसचिवलाई निर्वाचन आयोगले...
नेपाल पनि सतर्क, मानवीय संकट उन्पन्न हुन सक्ने !
काठमाण्डौ । सरकारले खाडी मुलुकले कतारसँगको जल, स्थल र हवाई सम्पर्क बिच्छेदको घोषणा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई आउन सक्ने समस्याबारे सतर्क रहन खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले खाडीमा रहेका नेपाली राजदूतसँग त्यहाँको पछिल्लो घटनाक्रमबारे नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिनुभयो...
काठमाण्डौ । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने समय लम्बिने सम्भावना बढेको छ । सुरुङ खन्ने रफ्तार घटेपछि १५ असोजभित्र उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने सम्भावना घटेको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार अहिले ठेकेदार कम्पनीले दैनिक १७ मिटरका दरले सुरुङ खन्दै आएको छ । १५ असोजभित्र उपत्यकाभित्र खानेपानी ल्याउन दैनिक २८ मिटरका...
काठमाण्डौ । करिब पाँच लाख नेपालीको श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारसँग उसका सातवटा छिमेकीले कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । मध्यपूर्वका साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), यमन र लिबियासँगै दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्सले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गरेका हुन् । अरबी क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याएको र...
काठमाण्डौ । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रुबाट एक सातामा १८ लाखभन्दा रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट कारबाहीमा परेका १६ हजार नौ सय ८६ मध्ये नौ हजार दुई सय ४१ जनाबाट १८ लाख ४८ हजार दुई सय राजस्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । र, बाँकी सात हजार सात सय ४५ जनाले जरिवाना...
मन्त्रालयको नम्बर ‘दिदीको अफिस केटीएम’को नाममा दर्ता !
काठमाण्डौ । सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । विश्वास नलाग्न सक्ला तर राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागका फोन नम्बर अरू नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको बेवसाइटमा राखिएका फोन नम्बरमध्ये एउटा एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी अर्को नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण...
काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुणमडी शर्माको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । विशेष अदालतले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै अनको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । विभिन्न व्यापारीक फर्महरुलाई छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । नीति र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना वित्तीय बन्दोबस्तीसहित विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले आइतबार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसित समझदारी (एमओयू) गर्नुभएको छ। कामचलाउ सरकारका मन्त्री...